MAHANORO Vedety fefiky ny rano, avotra ireo olona 11 tao anatiny
Avotra soa aman-tsara ireo olona miisa 11 tao anatin’ilay vedety rendrika tany amin’ny lakandranon’i Pangalane tany Mahanoro ny marainan’ny alahady 16 febroary lasa teo.
Lehilahy ny enina tamin’izy ireo, vehivavy ny 3 raha ankizy ny 2 ambiny. Vokatry ny rotsak’orana betsaka sy ny tafio-drivotra nentin’ny andro ratsy « Francisco » no nahatonga ny loza raha ny vaovao azo. Tsiahivina fa nanomboka ny zoma 14 febroary lasa teo nandalovan’ny andro ratsy "Francisco" teto Madagasikara dia vedety 2 hafa nifatotra amoron-drano no hita sy notarihin’ny vedety haingam-pandehan’ny APMF tany amin’ny 4km sy 10km miala avy eo Mahanoro. Ankoatra izay ihany koa dia marobe ireo traboina raha nisy ihany koa ireo namoy ny ainy.